Only3Days left to Application Closing! – Impact Hub Yangon
Only3Days left to Application Closing!
အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လိုသူများနှင့် ဆက်လက်တိုးချဲ့လိုသူများအတွက် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း၏ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်းအား ပိတ်သိမ်းရန် အချိန် (၃) ရက်သာကျန်ပါတော့သည်။
ယခုသင်တန်းအား အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့၊ အင်္ဂါနေ့၊ ၂၀၂၁ နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Business Idea Stage (လုပ်ငန်း စတင်လုပ်ကိုင်လိုသူများ ) ဖြည့်သွင်းရမည့် လင့်ခ်: https://bit.ly/YgnMdyKachinBusinessIdeaStageApplicationForm
Business Ongoing Stage (လုပ်ငန်းလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ) ဖြည့်သွင်းရမည့် လင့်ခ်: https://bit.ly/YgnMdyKachinBusinessOngoingStageApplicationForm
သင်တန်း တစ်ခုချင်းစီတိုင်းတွင် လူဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရှိပါသောကြောင့် အမြန်ဆုံး လျှောက်ထားကြပါရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။
Previous တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြုလုပ်သွားမဲ့ Food Startup Booster Program
Next MSME Virtual Capacity Building Program Timeline!
တောင်ကြီးမြို့မှာ ပြုလုပ်သွားမဲ့ Food Startup Booster Program
MSME Virtual Capacity Building Program Timeline!